79 maxbuus oo la geeyey Qardho
8 Dec 8, 2012 - 5:12:44 AM
Xabsiga Degmada Qardho ayaa dhowaan la gaarsiiyey maxaabiis gaareysa 79 oo falal danbiyeedyo kala duwan ugu xirnaa magaalada Bossaso kadib markii uu xariga ka jarey madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Maxamuud.
Taliye xigeenka xabisga Qardho Gaashaanle Maxamed Siciid Cismaan oo la hadlay Radio Garowe ayaa ku sheegay ku dhowaad 80-maxbuus inay yihiin tirade dadka la keeney Qardho oo falal danbiyeedyo galay inkastoo uu raaciyey inaysan gaarsiisneyn heerka Agrgagixisada ama burcadnimada.
Maxaabiista burcad badeeda ayuu xusey in xabsi weyn looga sameeyey Bossaso ,waxana uu ku darey in Xabsiga Qardho ku dhamaystiranyihiin adeegyada dhamaan islamarkaasina Qaab casireysan loo dhisey.
Xabsiga Qardho ayaa saddex qaybood ka kooban oo kiiba 13 qol tahay iyadoona loogu talo galay 8 maxbuus qolkii inay degaan ,waxana uu gaar u yahay raga oo keliya.
Waa tiradii ugu horeysey maxaabiis ah oo gaarta Garowe ka dib markii Todobaad ka hor uu xariga ka jaray madaxweynaha Puntland ,madaxda UNDP iyo Taliska Asluubta Puntland.
Halkan ka dhagayso waraysiga Cawil Cali Jaamac la yeeshey Taliyaha